OnePlus7ရဲ့ Cases များ ထွက်ပေါ်လာ – DigitalTimes.com.mm
OnePlus7ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ အွန်လိုင်းမှာ မကြာခဏ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အခုလည်း သူ့ရဲ့ ကေ့စ်များ ထွက်လာပါတယ်။ ကေ့စ်များမှာ အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံးအတွက် ဒေါင်လိုက် အပေါက်အရှည်ကို မြင်ရပါတယ်။ Slider ဆဲလ်ဖီး ကင်မရာအတွက် ထိပ်မှာ အပေါက်ဖောက်ထားပါတယ်။
နားကြပ်ပေါက်တော့ မပါပါဘူး။ အောက်ခြေမှာ USB-C Port နဲ့ စပီကာများအတွက် အပေါက်များ ပါပါတယ်။ မိုက်ကရိုဖုန်း ၂ လုံးလည်း ပါလာမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့လ အစောပိုင်းကပဲ သူ့ကို Giztop အရောင်းဆိုင်က စာရင်းတင်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူ့ရဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ Specs များကို ပြသထားပါတယ်။ အရောင်းဆိုင်က ဖော်ပြထားတဲ့ Specs များကို အောက်မှာ လေ့လာပါ။
•	Qualcomm Snapdragon 855 Soc, up to 2.84GHz, with Adreno 640 GPU.
•	Rear triple cameras: 48MP+20MP+5MP, 16MP pop up selfie camera.
•	8GB/12GB RAM, 128GB/256GB storage.
•	4000mAh battery, 44W super fast Dash charging.
•	Oxygen OS9base on Android 9.0 Pie.
သူ့မှာ ကြိုးမဲ့ အားသွင်း နည်းပညာ မပါဘူးလို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ စီအီးအို Carl Pei က အတည်ပြုထားပါတယ်။ OnePlus7ကို တရားဝင် မြင်ရဖို့ သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။ အဲဒီ အချိန်ကျမှ သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ကို သိရမှာပါ။
OnePlus7ရဲ့ Cases မြား ထှကျပျေါလာ
OnePlus7ရဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြား အှနျလိုငျးမှာ မကွာခဏ ပေါကျကွားထှကျပျေါနပေါတယျ။ အခုလညျး သူ့ရဲ့ ကစျေ့မြား ထှကျလာပါတယျ။ ကစျေ့မြားမှာ အနောကျကငျမရာ သုံးလုံးအတှကျ ဒေါငျလိုကျ အပေါကျအရှညျကို မွငျရပါတယျ။ Slider ဆဲလျဖီး ကငျမရာအတှကျ ထိပျမှာ အပေါကျဖောကျထားပါတယျ။
နားကွပျပေါကျတော့ မပါပါဘူး။ အောကျခွမှော USB-C Port နဲ့ စပီကာမြားအတှကျ အပေါကျမြား ပါပါတယျ။ မိုကျကရိုဖုနျး ၂ လုံးလညျး ပါလာမှာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့လ အစောပိုငျးကပဲ သူ့ကို Giztop အရောငျးဆိုငျက စာရငျးတငျထားပါတယျ။ အဲဒီမှာ သူ့ရဲ့ ဓါတျပုံနဲ့ Specs မြားကို ပွသထားပါတယျ။ အရောငျးဆိုငျက ဖျောပွထားတဲ့ Specs မြားကို အောကျမှာ လလေ့ာပါ။
သူ့မှာ ကွိုးမဲ့ အားသှငျး နညျးပညာ မပါဘူးလို့ ကုမ်ပဏီရဲ့ စီအီးအို Carl Pei က အတညျပွုထားပါတယျ။ OnePlus7ကို တရားဝငျ မွငျရဖို့ သိပျမလိုတော့ပါဘူး။ အဲဒီ အခြိနျကမြှ သတငျးအခကျြအလကျ အသေးစိတျကို သိရမှာပါ။
၄၇ နှစ်ကြာ iPad မှာ Lock Out ဖြစ်သွားတဲ့ လူ :D :D